NepalManch :: फेसबुककी पूर्वकर्मचारी भन्छिन्–फेसबुकले बालबालिकालाई बिगार्‍यो
फेसबुककी पूर्वकर्मचारी भन्छिन्–फेसबुकले बालबालिकालाई बिगार्‍यो
एजेन्सी । फेसबुकका वेबसाइट र एप्सले बालबालिकालाई हानि पु-याउने र विभाजन बढाउने फेसबुककी एक पूर्वकर्मचारीले गुनासो गरेकी हुन् । फेसबुकमा प्रडक्ट म्यानेजरकी रूपमा काम गरेकी ३७ वर्षीया फ्रान्सिस हाउगनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् ।
के सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्ने बानी छ ? सावधान !
सिमकार्ड कसको नाममा छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
‘सजिलो पे’ बन्यो नेपालकै पहिलो बहुभाषिक पेमेन्ट एप